Faysal Waad Baahan Tahay Buu U Bahalo Cunay ( Abdi-shotaly). |
Faysal Waad Baahan Tahay Buu U Bahalo Cunay ( Abdi-shotaly).
Naf go’aysiyo roob galbeed mid-koodna haduu galbado, gadaal uma soo nodee, faysal Cali dhurwaa, waa nin kaa shaqo tegay, rajo-na aan ka qabin doorsho iyo in cidi doorato, waanu is og yahay, markaa xaal wuxu ka noqday, kolay ka wax helaaya ma tihide, ku qadhaabo magaca gudmoomiye Xusbi, sidaas awgeed hawshaas si wacan buu u yaqaan iyo rux-ruxasha-deedda. Marka gacanta loo soo fidiyo, kiiba maaha aad shalay taqaanay, Hunguri qawl ma leh, cid qabataana ma jirto, nin baahiyi hayso-na ma jiro xadhi joojiyaa, dan-tiisuna waxa weeye allaw xero madhan xoolo soo geli. Akhristaw, hore baa Kulmiye ugu yidhi Mr Cali Dhurwaa ” UF” bayummadu ku tidhi, kumana rabto, ee ha waal-waalan. Kuwii lahaa waar ninkii is bedel, oo jooji wixii gacanta loo saari jirey, ee aan lahaa Dhurwaa Uudda ma daayo, ee iga diida-naayaw faysal-waa faysal uun. Murti somaliyeed baa waxay ahayd ” Abeeso dhul u ekaan bay kugu dishaa, wadaad-na dad u ekaane” Hadaad aragtaan Shaydaan subxaana-laah akhriyaaya, oo tusba rogaaya, sita khamiis cad, cid kale ha moodin waa faysal laba wajiile, waad baahan tahay buu u
bahalo cunaye, ayaan-ba carrab kale ha ku hadlo., wuxu yidhi Faysal Dhuuni raac “Laba la hinjiyaba waa hunguri kii horeyn jirwye”, anigu waan iska dhabaq-sanayaa, ee hayla yaabina.
H unguri hoo u baxdaw, haad-na eegmo ma daayo, bahal kuuma hambeeyo, hawdka aad maray-saana, balaayaa hurudee, adoon eegin hareeta, cadaw kuu hamiyooday, maad horaw-ga carawdid, hebedkii la jaqaana, cidladay ku hadhaaye, naa haraati nirgaa, waa hees geel-jiruhu uu geeliisa ugu heeso, kolka ay ribato baqdin awgeed, in laga dhacona ay wadnaha farta kaga hayaan, siddii askari gaadh haya oo gaaf wareegaan baalaha geela. waa aminta uu xaalku isi soo taago, lug-na baqo ugu joog, lugta kale-na nabad, ujeediyo haatan. Gudoomiye ku sheega Ucid, markaad soo koobto arin-kiisa, waa nin kharfay, , wuxuu mabda’iisu yahay, marka wax laguu dhiibana Waddani ku jeeso, marka waxba ka soo dhiiqi waayaan Maamulka qudhmiye, ee uu wax kuu soo fiiq waayo askarigu, waa in aad ku shidaa laydhka, si ay wax uga soo dhiiqaan. Ma jirto cid moog farsamooyinka Faysal ( waa Faysal Xagaayo’e). Ninka ka sugaaya go’aan uu fuliyo, ama wacad uu dad la galo in uu hir geliyaw, faysal yaqaan ma tihid ee cidlaad jafaysaa, Bal wuxuu saxeexay, hadda sidan ha ku dhacdo, oo aynu doorshadan ku qabsno ( Waa kuwa xildhi-baano kus heega’e), marka taasi dhamaato ee doorshadda dambe madaxnimadda la gelaayo, lana furaayo ururadda, baa laba xubnood loogu darayaa mucaaridka, saw ka hoos bax maaha, yaa lagu khaldayaa ee ka maskax liita askariga Iyo S. Gaal.
Siday inoo sheegtay diinteenu ( Quraan iyo Axaadiisi-ba) Astaamaha munaafaqa waxa ka mid ah, ( Calaamaatul- Munaafaq weeyee) sidatan:-
(a) Idaa Wacadda Khalafa. Oo micna-heedu yahay, haddii aad wax balan qaado, oo aad ka baxdo wixii aad heshiiska ku gashay.
(b) Idaa amina khayana, oo ah haddii aad qof aaminto, oo uu isaggii ku khiyaameeyo,
(c) Idaa Kalama Kadiba, haduu hadlo oo been kuu sheego.
Waxan ku soo xidhay, oo aan ku soo gunaanadayaa, xaajadan uu muranku ka taagan yahay, ahna doorashaa dib u dhacaysa ee lagu beer laxawsa-naayo, ummadan aan (CSW) geeriddii Nebiga ogayan, dabada-na ay ka riixayaan, asakrtan maamul Goboleedka Somaliland ay u handaraaban tahay, horta yaa caano kaga qubanayaan ee wax ku haysta? Haduu Saleebaan Gaal Kun sanadood dib u dhigo iyo haddii uu yidhaado beri ha la qabto, marna mid micno samaynaysa maaha, ciddii cirka roob ku ogi ha ka soo cabeen. Waddnina mid wax ku seegayaan maaha, ee waa iu uu ku adkaystaa, bartaa uu taagan yahay, bal waa la arki doonaa cidda ku lulatee, ee dhiisha caanaha uu ku shubtay ay ka daataane. shalay buu Saleebaan Gaal lahaa ( Markuu dib ugu rixaayey Maanta) wuxu sare ugu qaaday hadal-kiisa “Waynu Cadaysanaynaa arin-keena”. Taas baana markhaati asala ka ah, in amar ay askartu soo siisay, oo lagu yidhi khasab ku mari, jar bayse uga talaab-sadeene, haday fari tog-dheer la xushay.
N.B laba La hinjiya-ba Waa Hunguri Kii Horeyn Jirye!